Ogaden News Agency (ONA) – Joojiya Dhaqaalaha La Siinayo Kali-Talisnimada Itobiya (Stop financing tyranny like in Ethiopia: William Easterly)
Joojiya Dhaqaalaha La Siinayo Kali-Talisnimada Itobiya (Stop financing tyranny like in Ethiopia: William Easterly)
Ninka ku dhawaaqay ereyadaa waa Dhaqaalyahan Mareykan ah oo ku takhasusay – Xidhiidhka ka dhexeeya Kobaca Dhaqaalaha iyo Mucaawanada Dibadda (Economic Growth and Foreign Aid). Wuxuu Prof. William wax ka dhigaa jaamacadaha Mareykanka isla marahaantaa wuxuu xubin ka yahay hay’adaha dhowr ah oo dhaqaalaha Afrika ka warbixiya.
Wuxuu qoray kutub dhowr ah oo arimaha Afrika ku saabsan, dooda badan ayuuna ka qaybqaataa. Itobiya ayaa ka mid ah wadamada uu sida fiican uga xogwaramay, waxaana ka mid ah arimaha uu marwalba shiishka saaro Mucaawanadii la siin jiray KT. Meles oo aqoonyahano uu ka mid yahay Mr. William Easterly ay aad u diidanaayeen. Doodaha uu ka qaybqaatay waxaa ka mid ah dooda cinwaankeedu ahaa: Why Are We Supporting Repression in Ethiopia?.
Wareysiga aad halka ka daawan doontaan wuxuu ku yidhi Mr. William; Meles wuxuu ahaa Diktaatoor mana ahayn Horumariye ee wuxuu caqabad ku ahaa horumarka Itobiya. Wuxuu dilay buu yidhi Diktaatorkaa dad wadooyinka ku banaanbaxay ka dib markii la boobay codkoodii doorashada.